Apple inosimudzira mari yekutengwa kweApple Watch | Ndinobva mac
Apple inosimudzira mari yekutengwa kweApple Watch
Zviripachena kuti ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzatinadzo nhasi kutenga kutenga kweMac, iPhone kana Apple Watch muchitoro chekambani yeCupertino kana tisina mari inodiwa. Kutengwa kwezvigadzirwa kuburikidza nekubhadhara mari muchitoro cheApple chave chisarudzo chinonakidza kune vashandisi vazhinji, mune iyo Apple isu tatoziva kuti munhu anotarisira kutisiira mari ndiCetelem uye kuti parizvino kusimudzirwa kwekutenga mari inobhadharwa. chigadzirwa chinosara hapana mutengo maererano nechimbadzo.
Apple Kuona kutengesa kunofanira kuramba kuri rekodhi-kutyora
Uye ndizvo izvozvo Kana paine chigadzirwa chiri kuve nyeredzi mukutengesa kweApple, iyi ndiyo Apple WatchKunyangwe iyo iPhone, ndoda iyo Mac (iyo ino kota yakarasikirwa nemugove wemusika) iri kuzadzisa manhamba anoonekwa eApple's smart watches. Zvese zvinoratidza kuti vashandisi vanowedzera kushandisa iyi smartwatch uye chero ane iPhone, iPad kana Mac anogara achipedzisira achitenga kutenga Apple Watch.
Nenzira iyi, kusimudzira kwekutenga pasina mubereko (nguva dzose pasi pekubvumirwa naCetelem) kuri kuve protagonist kune vatengi vazhinji avo nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe vasingatenge zvishandiso nemari. Kubhadhara kutenga pasina mubereko kunogona kubatsira vashandisi vazhinji nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka uye iyi sarudzo yave ichiwanikwa kwenguva yakareba muzvitoro zveApple zviri pamutemo saka haufanire kuenda kumutengesi tenga yako Apple Watch yakapihwa mari pasina mubereko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inosimudzira mari yekutengwa kweApple Watch
Mukundi weOscar Taika Waititi anoshoropodza MacBook keyboard
Ming-Chi Kuo anoti kugadzirwa kweApple kuri munjodzi kubva ku coronavirus